नेतृत्वको खडेरी - Jhilko
पुर्व पञ्चहरुको पार्टी राप्रपामा पनि अब तीन अध्यक्ष हुने भएका छन । दुई राप्रपाबिच एकीकरण गर्दादुई अध्यक्ष राख्ने कमल थापाको प्रयासको कारण पार्टी एकता हुन सकेन । थापा र पशुपति शम्सेर राणा अध्यक्ष रहने भएपछि डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी एकता बिरोधी जस्तो देखिए । थापा नजिकका सञ्चारमाध्यमले डा. लोहनीलाई खलनायकको रुपमा चित्रण गरे । दुई अध्यक्ष राख्ने भएपछि आफुचाँही किन अध्यक्ष नहुने भन्ने डा. लोहनीको अडानले जित्यो र उनी पनि अध्यक्ष हुने भए । तीन अध्यक्ष राखेर पार्टी एकता गरियो । थापाले लिएको राजतन्त्र, सनातन हिन्दु धर्म लगायतका एजेण्डालाई सबैले स्विकार गरे । तर थापा एक्लैलाई अध्यक्ष अरुले स्विकार गरेनन् । पञ्चहरुको पार्टी साँच्चिकै पञ्चहरुले जे बिचार बोक्थे, त्यही बिचार बोक्न आइपुग्यो । तर, तीनजना अध्यक्षको गलगाँडका साथ ।
नेपालको पछिल्लो पार्टी राजनीतिमा बहु अध्यक्ष हुने प्रचलनलाई पञ्चहरुले पनि अँगाले । बिगतमा थोरै पार्टीहरुमा बहुपद र धेरै पार्टीमा एकल नेतृत्व हुने गर्दथ्यो । नेपालको राजनीतिक संक्रमणकालबाट अघि बढने बाटोमा छ । संविधान जारी भएको छ । धर्मनिरपेक्षता र संघियता सहितको गणतन्त्र सँस्थागत भएको छ । तर राजनीतिक पार्टीहरु भने संक्रमणकालमा प्रवेश गरेका छन । धेरै बिचार र धाराको खिचडी बनाएर राजनीतिक दस्ताबेज बनाइएको छ । बिचार र नेतृत्व महाधिवेसनले टुङ्ग्याउने भन्दै महाधिवेसनलाई पर पर धकेल्दै बहुअध्यक्ष बनाइएको छ । एकादुईलाई छोडेर भन्ने हो भने राजनीतिक पार्टीहरु अहिले साँच्चिकै संक्रमणकालको चरणमा छन । बिचार, संगठन र नेतृत्व संक्रमणकालिन बनाइएको छ । बहुपद होइन, एउटै पदमा बहु नेतृत्व स्थापित गराइएकोे छ । सरकारको नेतृत्व गरेको र झण्डै दुई तिहाई बहुमत निकट रहेको नेकपामा दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल बिराजमान छन । तीन दशक एकछत्र नेतृत्व गरेका प्रचण्ड र लामो समयको संघर्षपछि निर्वाचन मार्फत नेतृत्वमा आइपुगेका ओली दुवैलाई अध्यक्ष बनाउनु पर्ने बाध्यताको परिणाम बेला बेला देखिदैछ । नेकपामादुई बरिष्ठ नेता र एक उपाध्यक्ष छन । अधिकार घुमाई फिराई धेरै शब्द राखेर उस्तै उस्तै राखिएको छ ।
मधेस केन्द्रित राजपामा ६ जनाको अध्यक्ष मण्डल बनाइएको छ । ६ जनाले पालो पालो अध्यक्ष बन्छन । अध्यक्ष परिवर्तनसँगै केही हल्ली खल्ली हुन्छ । तर पछि उही हो, कार्यकाल बिताउने र सानोतिनो विवादमा सीमित रहन्छ । धेरै प्रयास गर्दा पनि देशभर जान नसकी मधेसमा नै केन्द्रित हुन बाध्य समाजवादी पार्टीमा पनि दुई अध्यक्ष छन । उपेन्द्र यादवलाई कार्यकारी र डा. बाबुराम भट्टराइलाई थपना अध्यक्ष (नाम जे दिए पनि त्यसको कुनै अर्थ छैन ।) बनाइएको छ । त्यहाँ पनि बरिष्ठ नेता बनाइएको छ । बैकल्पिक राजनीतिक शक्ति बनाउन नयाँ शक्ति नाम दिएर ठुलै हल्लीखल्ली गरेका डा. भट्टराई अन्ततः यादवको शरणमा पुगेर शरण लिन बाध्य भए । बैकल्पिक होइन, क्षेत्र केन्द्रित दलमा थपना अध्यक्ष बने । यस्तै बैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको दुहाई दिने साझा पार्टी र विवेकशील पार्टी पनि एकता गरी संयुक्त नेतृत्वमा गए । तर असफल भए । आ–आफ्नै बाटो लागे । विवेकशील घिसीपिटी बिचार बोकेर हिडिरहेको छ भने साझा पार्टी दक्षिणपन्थीको बैकल्पिक धारमा पुगेको छ । साझा पार्टीले पछिल्लो चरणमा जे बिचार अघि सारेको छ, त्यसबाट डराएर हतार हतार राप्रपालाई एउटै बनाइएको छ । बिचारलाई एक बनाए पनि नेतृत्व भने खिचडी शैलीको बहुअध्यक्षको साथमा ।
नेपालको राजनीतिमा प्रभावशाली नेपाली कांग्रेस अहिले अकमण्र्यको स्थितिमा छ । कुनै पनि निर्णय सर्वसम्मति हुँदैन । पार्टीले गरेको निर्णयलाई चुनौती दिन तमतयार भएर बसेको छ, पार्टीभित्रको स्थायी प्रतिपक्ष । महाधिवेसन सार्ने र टार्ने खेल चल्दैछ । विवादले कांग्रेसमा जहाँ पनि समस्या देखिदैछ । पछिल्लो चरणमा भइरहेको ध्रुविकरणको राजनीतिक खेलले बिजय गच्छेदारको प्रवेश बाहेक कांग्रेसलाई खासै छोएको छैन । गच्छेदारले बहुअध्यक्षको हैंसियत नराख्नु र शेरबहादुर देउवालाई नेतृत्व मान्न तयार हुनुको कारण बहुअध्यक्ष बनाउनु परेन । तर पार्टीभित्रका नेताहरुले जुन प्रकारले चुनौति दिइरहेका छन, त्यसको समाधान बहुअध्यक्ष त होइन ? भन्नुपर्ने अबस्था सिर्जना भएको छ । पहिलो र दोस्रो अध्यक्ष बनाउने हो भने कांग्रेसको समस्या सहजै समाधान हुनसक्छ भन्नेहरु भेटिन थालेका छन । कांग्रेसमा बहु अध्यक्ष बन्ने सम्भावना देखिदैन । तर समस्या समाधान गर्न त्यतै लाग्नुपर्ने अबस्था नआउला भन्न सकिन्न । अर्थात नेपालका राजनीतिक पार्टीहरु लगभग सबैमा रहेको विवाद बहुअध्यक्ष बनाएर समाधान गर्ने काम त हुदैछैन भन्ने प्रश्न खडा भएको छ ।
प्राविधिक नेतृत्वमा सीमित
धर्म निरपेक्षता र संघीयता सहितको गणतन्त्र सँस्थागत हुदै गरेको अहिलेको समयमा राजनीतिक पार्टीहरु संक्रमणकालको शैली र अन्तरिम संगठनात्मक पद्दतीमा फस्नु पक्कै पनि राम्रो होइन । राजनीतिक नेतृत्वसँग मुलुकलाई अघि बढाउने ठोस मार्गचित्र देखिदैन । परम्परागत सिद्दान्तका ठेली र केही अहिलेको अबस्थालाई समेटेर राजनीतिक दस्ताबेज बनाइएको छ । तर त्यस अनुरुप हिडने काम हुदैन । बिभिन्न बिचारलाई गज्याङगुजुङ बनाएर अन्तरिम बनाउने र नेतृत्व पनि अन्तरिम कायम गर्ने प्रबृत्तिले जनतामा निराशा नै छर्नेछ । राजनीतिक नेतृत्व विचारबाट जन्मनु पर्ने हो । अहिलेका नेताहरु स्पष्ट बिचार र सांगठानिक दृष्टिकोण सहित नेतृत्वमा आएका हुन । तर गणतन्त्र सँस्थागत गर्ने बेलामा भने प्राविधिक नेतृत्वमा सीमित हुन पुगेका छन । बिचार स्पष्ट नबनाई जे पाइन्छ, त्यसैमा रमाउने र लिने शैलीले नेतृत्वलाई गाँजेको छ । नेतृत्व प्राविधिक नेतृत्वमा सीमित हुन पुगेको छ । प्राविधिक नेतृत्वले न त पार्टीलाई ठिक ढँगले लानसक्छ, न त देशलाई नै । प्राविधिक नेतृत्वले सबैतिर प्राविधिक फाइदा र घाटा हेरेर काम गर्न थालेको छ । थोरै पनि सन्तुलन बिग्रने बित्तिकै ध्वसांत्मक बिद्रोह हुनसक्छ ।
लोकतन्त्र स्थापनापछि समावेशी समिति बनाउन थालेपछि समितिहरु भद्दा हुन थाले । पछि संक्रमणकालको बहानामा समितिहरु यति धेरै भद्दा भए कि केन्द्रीय समितिको बैठक नै महाधिवेशन गरे जसरी गनुपर्ने अबस्था आयो । समितिहरु भद्दा हुदाहुँदै अध्यक्ष नै भद्दा हुने गरी बहु बनाउन थालियो । नेतृत्वले बिचार दिन नसकेपछि दिएको बिचारलाई पनि अघि बढाउन नसक्ने भन्ने बुझेपछि प्राविधिक नेतृत्वमा सीमित हुन पुगेको छ । संरचना र राज्य संयन्त्र ठिक ढँगले चलेको अबस्थामा प्राविधिक नेतृत्वले पनि मुलुकलाई अघि बढाउन सक्छ । तर अहिलेको अबस्थामा त्यो सम्भव छैन ।तत्कालै कुनै पनि पार्टी या नयाँ बनाएर बैचारिक नेतृत्व आउन सक्ने देखिदैन । शिशु गणतन्त्रलाई थप संस्थागत गर्न प्राविधिक नेतृत्वले मात्र हुदैन । त्यसको लािग राजनीतिक नेतृत्वले त्याग गर्न सक्नुपर्छ । तर अहिलेको नेतृत्वबाट के त्यो सम्भब छ ?प्रश्न विचारणीय छ । समयबद्ध साप्ताहिकबाट
गोकुल बास्कोटाको घरमा भएको बिस्फोटको जिम्मा विप्लव नेतत्वको नेकपाले लियो
शेयरबजारमा फेरी हरियाली, नेप्से ७२.७८ अंकले बढ्यो
पर्यटकीय होटलका भान्सा गुणस्तरहीन
डोटीमा असिनाले हिउँदेबालीमा नोक्सान
जिल्लाको पूर्वीचौकीमा शनिबार साँझ एक्कासी परेको असिनाले खेतबारीमा लगाइएको गहुँ,...
अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा भिषण आगलागी, सङ्कटकालको घोषणा
जङ्गलमा केही समयदेखि लागिरहेको आगो नियन्त्रणमा नआएको र शक्तिशाली हावाहुरी चलिरहेको,...
कृषिले फेरिएको जीवन
दूध, सुन्तला, उखु, अदुवा, पलम, बाख्रालगायत कृषिजन्य उत्पादनको बिक्रीबाट चालू आवमा...